मंगलबार नेप्से २३ अंकले वृद्धि – Nepali Digital Newspaper
मंगलबार नेप्से २३ अंकले वृद्धि
धितोपत्र बजार मंगलबार शेयरको मूल्यमा दोहोरो अंकले वृद्धि भएको छ । नयाँ वर्षको पहिलो कारोबारका रूपमा सोमबार उकालो लागेको बजार आज पनि २३.३३ बिन्दुले बढेर एक हजार २१२.०५ बिन्दुमा पुगेको हो ।
यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ५.४८ बिन्दुले बढेर २६०.२४ बिन्दुमा पुगेको छ । स्टकका अनुसार कारोबार संख्या र रकममा समेत वृद्धि भएको छ । कुल १७० कम्पनीको २४ लाख ११ हजार ६५० कित्ता शेयर रु. ७४ करोड २७ लाख १८ हजार ७५१ मूल्यमा खरिद–बिक्री भयो ।
कारोबार भएका दश उपसमूहकै मंगलबार शेयर बढेको छ । बैंकिङ २९.४१, होटेल १४, विकास बैंक २०.०२, जलविद्युत् ५.८९, वित्त १०.७४, निर्जीवन बिमा ४८.९२, उत्पादन २.४६, अन्य २.९३, लघुवित्त ३५.८ र जीवन बिमा ८०.१९ बिन्दुले बढेको छ ।
कारोबार रकमका आधारमा आज एनएमबी बैंक शीर्ष स्थानमा पुगेको छ । उक्त बैंकको रु. ६ करोड ७० लाख ६० हजार ५६८, एनआइसी एसिया बैंक रु. चार करोड ९८ लाख २१ हजार ६३९, प्रभु बैंक रु. चार करोड ५८ लाख ७९ हजार ७०१, सिभिल बैंक रु. तीन करोड ३२ लाख ९३ हजार ५५८, नेपाल बैंक लिमिटेड रु. तीन करोड २४ लाख ९० हजार ७१५, कुमारी बैंक रु. दुई करोड ७५ लाख ७४ हजार २८४, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक रु. दुई करोड ३० लाख ९१ हजार १५९, साना किसान विकास बैंक रु. दुई करोड २४ लाख २० हजार ४४० बराबरको शेयर कारोबार भई शीर्ष स्थानमा रहे ।
स्टकका अनुसार आज श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्स कम्पनीका शेयरधनीले ६.६७ प्रतिशतले कमाए । यस्तै सेन्ट्रल फाइनान्स कम्पनी ६.५४, सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था ५.९६, डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था ५.५६, प्रभु बैंक ५.१८, सिद्धार्थ बैंकका शेयरधनीले ५.०५ प्रतिशतले कमाए । यस्तै युनिभर्सल पावर कम्पनीका शेयरधनीले ३.२२ प्रतिशतले गुमाए । एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी २.३४, समुन्नति माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंक २.३०, सिनर्जी पावरका शेयरधनीले १.९० प्रतिशतले गुमाए ।